Posted by Tranquillus | Nov 29, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Qaabab edeb leh oo lagula hadlayo kormeeraha
Marka la eego macnaha guud, waxa dhici karta in aanu dirno a email Shaqaale ay isku heer yihiin, mid hoose ama mid sare. Si kastaba ha ahaatee, odhaahda asluubaysan ee la adeegsanayo maaha mid isku mid ah. Si aad wax ugu qorto mid ka sarreeya, waxa jira habab asluubaysan oo si wanaagsan loo habeeyey. Marka khalad la sameeyo, waxay u ekaan kartaa niyad jab. Maqaalkan, ka hel hababka asluubta leh ee loo isticmaalo kormeeraha.
Marka la weyneeyo
Marka aan la hadlayno qof leh darajo sare, waxaan guud ahaan isticmaalnaa "Mr." ama "Ms." Si aad u muujiso tixgelinta dhex dhexaadiyahaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho xarafka weyn. Dhib malaha haddii calaamadda "Sir" ama "Madam" ay ku jirto foomka rafcaanka ama foomka ugu dambeeya.
Intaa waxaa dheer, waxaa lagu talinayaa in sidoo kale la isticmaalo xarafka weyn si loogu magacaabo magacyada la xiriira sharafta, darajada ama shaqooyinka. Markaa waxaanu odhan doonaa, hadba haddii aanu u qorno agaasimaha, guddoomiye ama madaxweynaha, “Mudane Agaasime”, “Mudane Guddoomiye” ama “Mudane Madaxweyne”.
Waa maxay nooca edeb leh si loo soo gabagabeeyo iimaylka xirfadlaha ah?
Si loo soo gabagabeeyo iimaylka xirfadlaha ah markaad la hadlayso kormeeraha, waxaa jira dhowr hab oo edeb leh. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in qaacidada asluubta ee dhamaadka iimaylka ay tahay in ay la jaanqaado tan la xiriirta wacitaanka.
Haddaba, waxaad isticmaali kartaa odhaahyo asluub ​​leh si aad u soo gebagebayso iimaylka xirfadaysan, sida: "Fadlan aqbal Mudane Agaasime, adigoo muujinaya dareenkayga gaarka ah" ama "Fadlan rumayso, Mudane Guddoomiye iyo Maamule, muujinta ixtiraamkayga qoto dheer".
Si aad u soo koobto, sida saxda ah ee qaabka emaylka xirfadlaha ahi ku talinayo, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa tibaaxo kale oo asluub ​​leh sida: "Salaan wanaagsan". Waa qaacido asluubaysan oo aad u faa'iido badan dhex-dhexaadiyaha ama wariyaha. Waxay si cad u muujinaysaa inaad ka sarraysiinayso qashinka si waafaqsan xaaladdiisa.
Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la ogaado in tibaaxaha ama tibaaxaha asluubta qaarkood ee la xidhiidha muujinta dareenka ay tahay in si xeeldheer loo isticmaalo. Tani waa xaalad marka qofka soo diray ama qaataha uu yahay naag. Sidaa awgeed, haweeneyda lagulama talinayo inay dareenkeeda u soo bandhigto nin, xitaa kormeerihiisa. Gadaalku sidoo kale waa run.
Si kastaba ha ahaatee, sida aad qiyaasi karto, weedho asluub ​​leh sida "Your Daacad" ama "Daacadnimo" waa in laga fogaadaa. Halkii, waxaa loo adeegsadaa asxaabta dhexdooda.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha dhammaan ku saabsan isticmaalka qaacidooyinka edeb leh si sax ah. Waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u yeelataa higgaadda iyo naxwaha.
Intaa waxaa dheer, waa in laga fogaadaa soo-gaabista, sidoo kale waa in la iska ilaaliyaa odhaahyada khaldan sida: "Waan kuugu mahadcelin lahaa" ama "Fadlan aqbal..." Hase yeeshe, way fiicantahay in la yiraahdo "waan u mahadcelinayaa" ama "Fadlan aqbal..."
U dir iimayl kormeerahaaga: waa maxay qaacidada edeb leh ee aad isticmaalayso? Nofeembar 29th, 2021Tranquillus
horeKu xooji iimayladaada xirfadlayaasha ah qaabab asluubaysan oo si wanaagsan loo habeeyey
socdaWaa maxay edeb caynkee ah si aad ugu dirto mahadnaqa email xirfadle ah?